Talooyin iyo tabaha in Play / Edit / Beddelaan 4K Videos
Ma doonaysaa in ay ku raaxaystaan ​​4K video / filimada guriga si xor ah? Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay ciyaaryahano qaar ka mid ah, tafatirayaasha ama converters in aad PC. Ha welwelina, halkan waxaad ka heli doontaa wax walba oo ay ka mid yihiin Talooyin iyo tabaha loo isticmaalo in faahfaahinta.
1.8 4K Blu-Ray "
Waxaan aragnaa iyo aad u badan 4K taageeray video kamaradaha la heli karo, oo sida xaqiiqada ah ma noqon doonto muddo dheer ilaa 4K waa qaab caadi ah in video kamaradaha oo dhan. Waayo, hadda, kaliya ugu wanaagsan oo ugu horumarsan magac iyo waxyaabaha aan taageeri doonnaa xallinta hooyo 4K. Hoos waxaan kuugu qoran oo ku tilmaamay toban ka mid ah ay aad u ugu fiican oo ka mid ah 4K kamaradaha video, guud ahaan kala duwan oo ka mid ah dhibcood qiimo.
4K Super 35mm shidma
Canon xeeraan gashto socon Buur
4K iyo duubo HD
Waxaa la dhisay ee SSD taariikhqorihii
Waxaa ka mid ah Xallil DaVinci iyo UltraScope
Blackmagic shaki la'aan waa mid ka mid ah magacyada xushmada badan adduunka camera video ah. Waxyaabaha ay tayada xirfadeed yihiin heer sare ka hadlay oo ay isticmaalaan kuwa doonaya kaliya ugu fiican. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, Blackmagic kani suuragal ah in dadka ku jira xitaa miisaaniyadda suubban. 4K video duubo waxaa suurtagal ah oo aan u baahan in ay ku qaataan nasiib ah, iyo camera Blackmagic Design Production 4K waa mid la malaha ay noqon sare liiska dadka of tixgelin.
The gashto socon Canon xeeraan Buur ka dhigan tahay in lenses qiimaha la awoodi karo oo inta badan aad u hooseeya waxaa loo isticmaali karaa on camera, oo ay gacanta ku dhameystiran elektaroonik ah hayn. Tani waxay keenaysaa in maalgashiga guud dhaqaale hoos, oo ay tayada xirfadeed 4K duubo gacmaha enthusiast miisaaniyadda galay. Waxaa sidoo kale ka dhigan tahay gudaa kuwii hore u leedahay lenses Canon xitaa ma yeelan doonaan si ay u sameeyaan maalgashi cusub ee lenses cusub marka la isticmaalayo Blackmagic Design Production Camera 4K.
2. Camera Blackmagic Design URSA 4K Digital shaneebada
Price: $ 6.495
3840 x 2160p CMOSka shutter caalamka shidma
10.1 "screen 1080p flip-out LCD
Laba 5 "Touchscreens
2x XLR gashiga audio oo xoog leh phantom
Dual CFast wareejinta 2.0 Card
Tilmaamay user hore upgradeable 4K camera ah film digital, Design Blackmagic ka URSA awoodo in la isticmaalo si isku mid ah iyo sidoo kale u ah Shooter video shakhsi, ama shaqaalaha film waaweyn. The gashto Buur shirka iyo shidma waa la bedeli karaa, loona casriyeeyaa, taasoo la micno ah in aadan haysan si ay kor jirka oo dhan camera kaliya si aad u hesho shidma a cusub ee mustaqbalka.
3. Camera GoPro HERO3 + Black Edition
4K, 2.7K, 1440p & 1080p taageero
12MP weli photos at ilaa 30 loox kasta labaad
Ultra ballaaran gashto galaas xagal
Camera Housing taraq in 131 '
Waxaa la dhisay ee Wi-fi
20% ka yar iyo 30% nolosha batariga ka badan HERO3
GoPro yihiin kamaradaha caan ah oo ka mid ah wax toogan jiray ficil iyo kuwa doonayaa camera ah la awoodi karo, la qaadi karo oo adag oo loo isticmaali karo xaaladaha adag. At ka yar $ 400, tani waa mid ka mid ah jaban ugu hooseeya 4K kamaradaha suuqa hadda. Waxa uu ka dhisay WiFi iyo biyuhu waa ka ilaa 40 - taas oo ka dhigaysa doorashada cad kuwa doonaya in ay sameeyaan video quuska iyo sawir miisaaniyada suubban.
Shidma Sony 4K CMOSka
Xawaaraha sare toogtay ilaa 120 loox kasta labaad
Small, iftiinka iyo design qaybsan
Gudaha 2k iyo duubo HD
4K / 2k cayriin duubista si ikhtiyaari ah oo taariikhqorihii AXS-R5
The dhammaadka sare camera Sony PMW-F5 CineAlta dhab ahaan waa kala duwan qiimaha videographer xirfadeed ama halis hiwaayadda ah. Set feature waa ballaaran, oo sida kan kara in design aadka loo qaybsan ee F5 ah miday mahad.
5. Sony NEX-FS700R Super 35 fiidiyo
Price: $ 7.699
Shidma 4K Exmor Super 35mm CMOSka
4K / 2k 12-Inyar cayriin in AXS-R5 taariikhqorihii
Mooshin Super gaabis at 960 loox kasta labaad
3.5 "shaashadda LCD
ISO ilaa 64,000
Dual XLR, HDMI iyo 3G / HD-SDI xirnaanta
Naadi SD, SDHC, SDXC iyo Xasuusta ul Duo
The Sony NEX-FS700R waa hay'ad ka iibsan kaliya oo qoreysa E-Buur ah in loo isticmaali karaa adapters xisbiga saddexaad, taas oo ay u taageeraan ku dhowaad wax DSLR, shineemo iyo SLR 35mm gashto awoodaan. Miday Tan waxaa u dhigmaan qaababka ay ka mid yihiin ISO toogtay ilaa 64,000, afar ka mid ah sida diirada taago oo la doortay si ay wax soo saarka 4K cayriin ee 60fps in a taariikhqorihii Sony cayriin.
6. 4K Compact Xararad fiidiyo
Native 4K duubo
4 kaar oo SD
10x F / 2.8 zoom gashto
Xasilinta image indhaha ka dhisay,
Full HD, MPEG4, AVCHD iyo H.264 qaabab waxaa taageera
A bartamihii jaban 4K doorashada waa fiidiyo JVC GY-HMQ10, taas oo ah is haysta, camera haboon la dhisay gashto zoom, jidaynayey for toogashada ah tiro balaadhan oo ah goobaha, oo aan u baahan in ay maal-lenses qaali si gooni gooni ah. Tani waa kamarad kuwa jecel inay Xararad soo gani maayo, oo aan tayada 4K Quusan.
Price: $ 7.950
Ilaa 18 joogsato kala duwan oo firfircoon
1080p, 3K, 4K iyo 5K REDCODE qaabab cayriin
GPI kiciyaan, ethernet, RS232 iyo fursadaha hago wireless
Xulashada in Dragon waxa casaanta ah taas oo uu leeyahay shidma 19MP iyo 6144 x 3160 xallinta
Kala duwan ee gashto dalka buuraha leh fursadaha
RED waa magac in wax halis ah video enthusiast waa ogyahay. Waxyaabaha ay yihiin heer sare la doonayo, laakiin had iyo jeer ma miisaaniyad ah ee qof kasta. Red Scarlet-X badala tan, ee ka yar $ 8000 jirka laftiisa. Mid ka mid ah ugu doonteen muuqaalada in camera kasta waa ay qaab xaaladood iftiin yar yahay, ama goobaha la dhalaalaya xad-dhaaf ah iyo dhinacyada madow. Iyada oo ilaa 18 joogsato kala duwan oo firfircoon, ee RED Scarlet-X qalabeysan yahay in ay la tacaalaan Hooskooda u qoto dheer oo xooga dhalaalaya leh nimco.
RED loogu talagalay ku siisid gashto ugu caansan, iyadoo doorasho ee Nikon, Canon xeeraan, Leica, iyo fursadaha PL Buur.
8. Camera Panasonic Lumix madow-GH4 4K Mirrorless Micro Afar meelood Digital
16.05MP Digital Live bilood sensor
4096x2160 Tansania 4K ee 24p
UHD 4K 3840x2160 ee 30p / 24p
Ilaa HD Full in 60p
3 "hubiye OLED
4: 2: 2 8-bit ama 10-Inyar HDMI Output
Weather jirka daboolay
Afar meelood Micro, ama mirrorless, kaamirooyinka digital ku guuleysteen soo socda weyn, iyo Panasonic ayaa safka hore ee kacaanka this. Hadda waxay ku sii jeeda jiilka soo socda ee M4 / 3 kamaradaha la taageero 4K, la Panasonic Lumix madow-GH4. Waxana si, milkiilayaasha camera DSLR yihiin jeestay dhinaca hay'adaha mirrorless ay size dheeraad ah ee isafgaradka, oo hadda ay aadka u horumarsan awoodaha video. Oo weliba, ma jiraan wax camera DSLR run la video awoodda 4K, laakiin Panasonic oo ay dadka madow-GH4 gelinaya technology this gacmaha toogan video galay on miisaaniyad - ceelka hoos $ 2000, waxaa aad u adag in la eego la soo dhaafay GH4 Lumix ah .
9. Camera Canon EOS C500 4K shaneebada
Price: $ 19.999
4K cayriin (4096 x 2160) Output
8.8 Baarlamaanka Super 35mm-Size CMOSka sensor
Dual saarka 3G-SDI
Camera A halis u ah oo halis ah 4K video Shooter, C500 ka Canon sida xaqiiqada ah waa maalgelin dhaqaale oo muhiim ah oo ay u badan tahay ma model ah in dadka cusub oo dunida ka mid ah 4K video u socdaan si ay u eegaan. Laakiin kuwa diyaar u ah inay kor u qaado heerka ku xiga ee toogashada 4K ka heli doontaa way ku adag tahay in ay eegaan dhaafay C500 ah. 10 yara 4K cayriin ee ilaa 60p, oo lagu daray qeybtii hore ee cayriin ilaa 120p, waxay ka dhigan tahay C500 wuxuu qaban karaa talaabo degdeg ah si fudud. Sidii la filayay, 2k, full HD iyo Bawdada HD ayaa sidoo kale taageeray.
C500 waxaa laga heli karaa laba nooc, taas oo ku xidhan tahay noocyada kala duwan ee lenses aad rabtid inaad isticmaasho la. Ee ah kuwa ka jecel lenses shineemo, waxaa jira ee version PL Buur, halka ay version xeeraan Buur oggolaanaysa in tiro balaadhan oo ah la awoodi karo Canon iyo lenses kale in lagu lifaaqo. Canon Log gamma u oggolaanaysa in aalada ah wax soo saarka post xirfad leh marka la eego saxo midabka iyo kala astaynta jagooyinka.
10. Canon EOS-1m C
18.1Mp CMOSka sensor
4K iyo 1080p HD video awoodda
3.2 "LCD Screen
Gashto Canon xeeraan korto
61 dhibic autofocus
Ugu qiimaha EOS Canon ee C500 bar, EOS-1m C waa DSLR kacaanyahan ah hybrid waa camera ugu horeeyay ee noocan. Awooda isku Tani waxaa ka mid ah iyagoo si ay u qoraan labada video 4K (iyo sidoo kale HD video), marka lagu daro weli images awoodaan. Tan waxaa la samayn karaa in kaararka CF ee kamarad, ama in rikoorrada dibadda ee uncompressed qaab HD buuxa.
Dadka waxaa loo isticmaalaa in la isticmaalayo kamaradaha DSLR Canon, ama jirka DSLR kasta, si deg deg ah noqon doonaa raaxo la video EOS-1m C. 4K lagu qabtay karaa iyada oo aan la isticmaalayo qalab wax lagu qoro dibadda, iyo tirada yar ee camera taasi waxay siinaysaa cad ah ayaa qarka u badan badan oo tartanka, gaar ahaan wax toogan jiray video jecel Xararad toogtay, ama deegaanno xiran ama adag.
Kuwani sare toban 4K video kamaradaha siiyaan tiro balaadhan oo ah doorasho, marka ay timaado in muuqaalada iyo qiimaha, waayo, dadka kuwaas oo doonaya toogashada ugu fiican in 4K xal leeyahay in ay bixiyaan.
Waxaa jira dhowr ah 4K video converters la shaqayn awood badan. Si kastaba ha ahaatee, haddii video diinta waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Video Converter Ultimate , taas oo ah aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Top 10 4K Video Kaameerada